जिज्ञासा जवाफ(चैत्र) - Shikshak Maasik
by • • 2071_12, जिज्ञासा जवाफ • Comments (0) • 4554
कस–कसले पढाउने ?
कक्षा ९ र १० मा ऐच्छिक प्रथम र द्वितीयका रूपमा अध्यापन गरिने अर्थशास्त्र, लेखा आदि विषयहरू शिक्षा नियमावलीको अनुसूची १२ (घ) नं. ५ बमोजिम नियुक्ति पाएको शिक्षकले मात्रै पढाउने हो कि अरूले पनि पढाउने हो ?
खडक स्मृति उमावि टीकापुर, कैलाली
शिक्षा नियमावलीको अनुसूची १२ बमोजिम ऐच्छिक विषयका निम्ति नियुक्त शिक्षकले कक्षा ९ र १० को ऐच्छिक विषयको अध्यापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि अनुसूची १२ बमोजिम नियुक्त शिक्षकहरू पर्याप्त नभएको अवस्थामा सोही विषय अध्ययन गरेका अन्य योग्य शिक्षकबाट समेत ती विषय अध्यापन गराउनुपर्ने हुन सक्छ ।
स्रोत व्यक्तिको योग्यता
स्रोत व्यक्ति हुनका लागि पूर्वनिर्धारित शर्तहरू के–के हुन् ? निमावि वा प्राविको स्थायी शिक्षण अनुभवका आधारमा स्रोत व्यक्ति बन्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?
राम प्रमोद यादव
स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका (पहिलो संशोधन) २०७१ अनुसार स्रोत व्यक्ति बन्न शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर वा अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी शिक्षाशास्त्रमा स्नातक वा १० महीने सेवाकालीन तालिम प्राप्त गरी माध्यमिक शिक्षणमा कम्तीमा सात वर्ष स्थायी अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्छ । यति योग्यता नभएको व्यक्ति स्रोत व्यक्ति बन्न पाउँदैन ।
खै त हाम्रो तलब वृद्धि ?
आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेट प्रस्तुत गर्दा ‘सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्घि हुन्छ’ भनिएको थियो । तर सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकको हकमा आजको दिनसम्म पनि बढ–तलब लागू भएको छैन । कुरो के हो ?
भगवती मावि, चैनपुर–४, चित्लाङ, संखुवासभा
बढ–तलब अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूको हकमा पनि अवश्य नै लागू हुन्छ । त्यसनिम्ति सबै जिल्लामा बजेट निकासा पठाइसकिएको छ । सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा विद्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोला ।
प्रश्न गलत छैन
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा २०६७ मा प्रकाशित कक्षा–३ को गणित विषयको ‘क्षमता’ पाठ शीर्षकको पेज नं. ८० मा रहेको क्षमताको जोड र घटाउ अभ्यास–३ को प्रश्नमा ‘एउटा जगमा १०० मि.लि. को भाँडाले पानी भर्दा कति पटकमा जग भरिन्छ, पत्ता लगाऊ’ भनेर सोधिएको छ । तर कति लिटर क्षमता भएको जग हो भनी स्पष्ट गरिएको छैन । किताबमा उल्लेख गरिएको प्रश्न गलत भएन र ?
सरस्वती प्रावि क्यामिन–२, तनहुँ
धन्यवाद ! तपाईंको जिज्ञासा एकदम उपयुक्त छ । यो एउटा खुला प्रश्न हो । यस्तो प्रश्नले एउटै मात्र सही उत्तरको अपेक्षा नगरी उत्तरमा विविधता खोजेको हुन्छ । निर्माणवादको सिद्धान्त अनुसार यस्ता किसिमका खुला प्रश्नहरूबाट विद्यार्थीहरूमा खोज–अनुसन्धान ९भ्हउयिचष्लन० गर्ने, अनुमान गर्ने ९भ्कतष्mबतष्लन० र ज्ञान निर्माण गर्ने ९ऋयलकतचगअतष्लन प्लयधभिमनभ० जस्ता सीप र बानीको विकास हुन्छ । यसमा विद्यार्थीले गरेर सिक्ने अवसर पाउँछन् । त्यसैले यस प्रश्नमा विद्यार्थी आफैले प्रयोगात्मक रूपमा नापेर ल्याएका फरक फरक उत्तरलाई सही मान्नुपर्छ । जस्तो, एक लिटरको जग भर्नेको जवाफ १० पटक हुन्छ, आधा लिटरको जग भर्नेले ५ पटक, २०० मि.लि. को जग भर्नेले २ पटक भन्ला । सबैका जवाफ सही हुन्छन् ।
आवेदन दिन पाउँछु ?
२०५० सालदेखि अस्थायीमा कार्यरत शिक्षक हुँ । हाल ४२ वर्षको भएँ । मैले मानविकी संकायबाट आई.ए. उत्तीर्ण गरेको छु । मसँग प्रावि तहको स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र पनि छ । साथै, १० महिने तालिम पनि लिएको छु । अब मैले शिक्षक सेवा आयोगबाट खुल्ने विज्ञापनमा प्रावि तहमा आवेदन दिन पाउँछु कि पाउँदिन ?
सदुवा प्रावि पौदाक–९, तेह्रथुम
शिक्षक सेवा नियमावली २०५७ को नियम १० अनुसार तपाईंको उमेरको हद नाघिसकेको देखिन्छ । तपाईंले नियम १० कै उपखण्ड (छ) अनुसार पाउने सुविधा अनुसार गत सालको शिक्षक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धामा भाग लिइसकेको हुनुपर्छ । यसर्थ विद्यमान ऐन–नियम संशोधन भएनन् भने तपाईंले अब खुल्ने विज्ञापनमा आवेदन दिन पाउनु हुन्न ।
प्रवक्ता, शिक्षक सेवा आयोग
बढ–तलब कहिले ?
हरेक वर्षजसो शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब–भत्ता वृद्धि हुन्छ । तर विद्यालय सहायक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि हुँदैन । किन यस्तो विभेद ?
देवीस्थान–५, फलेवास, पर्वत
विद्यालय सहायक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धिबारे छलफल भइरहेको छ । त्यसनिम्ति अर्थ मन्त्रालयसँग रु. ४ अर्ब बजेट पनि मागेका छौं । शिक्षा विभागले माग गरे अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भयो भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि तपाईंहरूको बढ–तलब लागू हुन सक्ला ।
पेन्सन पाइन्छ ?
पेन्सन खाइरहेकी शिक्षक श्रीमतीको मृत्युपछि पतिले पेन्सन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? पाएमा के कस्तो व्यवस्था छ ?
शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११५ उपनियम १ र २ अनुसार कुनै शिक्षकको नोकरीमा बहाल छँदै वा निवृत्तिभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा; उक्त शिक्षकले कसैलाई इच्छाएको भएमा त्यस्ता व्यक्तिले र इच्छाएको व्यक्तिको पनि मृत्यु भएमा वा त्यसरी कसैलाई पनि इच्छाएको नभएमा निजको एकाघरको नजिकको हकवालाले निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ । तर पतिले पत्नी र पत्नीले पतिलाई इच्छाएको हकमा भने सात वर्षपछि पनि निवृत्तिभरणको आधा रकम आजीवन पाउने व्यवस्था छ ।
उपनिर्देशक, विद्यालय शिक्षक किताब खाना
हाइड्रा दुवैको उदाहरण हो
कक्षा १० को विज्ञान किताबको पेज नं. १८६ र १८७ मा ‘जनावरमा अमैथुनिक प्रजनन्’ भन्ने शीर्षक अन्तर्गत फिसन ९ँष्ककष्यल०, बडिङ ९द्यगममष्लन० र रिजेनेरेशन ९च्भनभलभचबतष्यल० मा हाइड्रा ९ज्थमचब० लाई बडिङ र रिजेनेरेशन दुवैको उदाहरण हो भनी उल्लेख गरिएको छ । यी दुईमध्ये हाइड्रालाई कुन चाहिँको उदाहरण मान्ने ?
दुलालेश्वर उमावि, भुलुम्टार ६, काभ्रे
हाइड्राले शरीरका भित्तामा बड उत्पादन गर्छ, जुन लघु–वयस्क रूप धारण गर्दै परिपक्व भएपछि अलग हुन्छ । त्यसै गरी सबै शरीर स्तम्भ कोशिकामा लगातार माइटोसिस सेल विभाजन भइरहेको हुन्छ । यो बसाइँ सराइ गर्दा र विषम परिस्थितिमा अलग शरीर भएर छुट्टिन्छ । शरीर आधा भागमा टुक्रिँदा तल्लो भागबाट टाउको निस्कन्छ भने माथिल्लो भाग खुट्टाको रूपमा बढ्छ अनि प्रत्येक टुक्रा आफ्नो मूल स्वरूपमा फर्कन्छ । त्यस कारण हाइड्रा बडिङ र रिजेनेरेशन दुवैको उदाहरण हो ।
प्राणीशास्त्र शिक्षक, युनिभर्सल कलेज
अध्ययन बिदा पाउनु हुन्न
म निमावि तृतीय श्रेणीकोे स्थायी शिक्षक हुँ । मेरो शैक्षिक योग्यता बी.एड. मात्र हो । मलाई एम.एड. पढ्ने इच्छा छ । अब मैले अध्ययन बिदा लिएर एम.एड. पढ्न पाउँछु कि पाउँदिन ?
दिनदयालु निमावि, चामे–४, मनाङ
तपाईंले माध्यमिक तहको शिक्षक बन्ने योग्यता हासिल गरिसक्नुभएको छ । त्यसैले तपाईंले चाहनुभएको थप योग्यता स्वेच्छिक हो । अध्ययन बिदा कार्यविधि २०५५ अनुसार जुन तहको शिक्षक हो; त्यस तहको आधारभूत योग्यताभन्दा ठीक माथिल्लोे योग्यता हासिल गर्न मात्र अध्ययन बिदा स्वीकृत गर्न सकिन्छ । त्यस कारण तपाईंले एम.एड. पढ्नका लागि अध्ययन बिदा पाउनु हुन्न । विद्यार्थीको पठनपाठनमा व्यवधान पैदा हुन नदिई बिहान–बेलुका समय मिलाएर आफ्नो अध्ययन अघि बढाउन भने तपाईंलाई केहीले छेक्तैन ।
सिटरोल नं. कहिले आउला ?
हामीले सिटरोल फारम भरेर बुझएको तीन महिना भइसक्यो । हाम्रो सिटरोल नं. कहिले आउने होला ?
शिवकुमार कामति, संस्कृत उमावि,
शम्भुकुमार राय, जनकल्याण मावि,
राम प्रवोध यादव, चोलान प्रावि,
हाल पचहत्तरै जिल्लाबाट प्राप्त सिटरोल फारम दर्ता प्रक्रिया जारी रहेको छ । जिल्लाबाट आइपुगेको खण्डमा सकभर चाँडै नै तपार्इंले जिशिका मार्फत यसको जानकारी पाउनु हुनेछ । जिशिकामा सम्पर्क राख्नुहोला ।
२०६२÷०३÷१४ मा नियुक्ति पाई राहत दरबन्दीमा कार्यरत एक शिक्षक हुँ । गत असार महिनामा भएको दुर्घटनामा परी मेरो खुट्टा भाँचिएको छ । हाल म बैसाखीको सहाराले मात्र हिँडडुल गर्न सक्ने भए तापनि नियमित विद्यालय गइरहेको छु । शिक्षक सेवा आयोगले अब खोल्ने विज्ञापनमा (आन्तरिक प्रतिस्पर्धा) र आरक्षित तथा समावेशी कोटा (अपाङ्ग) बाट आवेदन दिन पाउँछु ?
जनज्योति प्रावि, रिस्कु–४, उदयपुर
शिक्षक सेवा नियमावलीको समावेशी पदमा दरखास्त बुझउने आधार अनुसार शारीरिक अशक्तको हकमा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा समाज कल्याण परिषद्बाट अपाङ्गता प्रमाणित भएको आधारमा आवेदन दिन पाउनुहुन्छ ।
अस्थायीको सरूवा हुँदैन
अस्थायी शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवा हुन्छ कि हुँदैन ? हुन्छ भने मैले के गर्नुपर्ला ?
सदुवा प्रावि, पौदाक–९, भस्मे, तेह्रथुम
अस्थायी शिक्षक सरुवाको व्यवस्था नभएकाले जिल्लान्तर सरुवा हुने सम्भावना रहँदैन ।